कृषि वैज्ञानिक मदन राई भन्छन्, 'हजार वर्षपछि पृथ्वी रहन्‍न, मानिस डढेर मर्नेछन्' ~ FMS News Info
कृषि वैज्ञानिक मदन राई भन्छन्, 'हजार वर्षपछि पृथ्वी रहन्‍न, मानिस डढेर मर्नेछन्'
हालै वैज्ञानिकहरूले ठूलो शोधपछि एउटा भविष्यवाणी गरेर पृथ्वी छैटौं महाप्रलयको युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
स्टानफोर्ड उड्स इन्स्टिच्युट फर इन्भारोमेन्टका प्राध्यापक तथा शोधकर्ता पाउल इर्लिचको टोलीले यस्तो भविष्यवाणी गरेको हो। यो भविष्यवाणी 'साइन्स एड्भान्स जर्नल'मा छापिएको छ।
यो शोधबारे समाचार प्रकाशन र प्रसारण भएपछि मानिसमा त्रास फैलिएको देखियो। मानिसले प्रकृतिबाट प्रशस्त फाइदा उठाएर प्रकृतिलाई नै हेप्न थालेपछि यस्तो अवस्था आउन लागेको हो।
म तर्कसहित भन्छु, अबको एक हजार वर्षपछि यो पृथ्वीमा प्राणीजगत् र वनस्पतिको अस्तित्त्व रहनेछैन।
यदि पृथ्वीमा प्राणीजगत्को अस्तित्त्वको अवस्थालाई अलि लम्ब्याउने हो भने माटोबाट जुन तत्त्व हामीले लिन्छौं, त्यो अर्को तत्त्वमा रूपान्तरित हुन्छ।
त्यो रूपान्तरित तत्त्वलाई माटोमै लगाउने हो भने प्राणीजगत्को अस्तित्त्वको अवस्थालाई केही अरू वर्ष लम्ब्याउन सकिन्छ।
पञ्चतत्त्वले अडिएको छ, यो पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, आकाश र माटो नै पञ्चतत्त्व हुन्। तत्त्व सिर्जना हुँदैन, न नष्ट नै हुन्छ।
यो त रूपान्तरितमात्रै हुन्छ। यही तत्त्व रूपान्तरण हुने चक्र खल्बलिएपछि कसरी प्राणीजगत् यो संसारमा टिकिरहन सक्छ?
यसरी चक्र खल्बलिइरहेको अवस्था देख्दा र वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिरहेको तथ्य देख्दा लाग्छ, भविष्यमा मानिसलगायत प्राणीजगत् डुबेर, डढेर र सुकेर मर्नेछन्।
तत्त्व रूपान्तरणको उदाहरणका लागि माटोमा मल र पानीबाट धान फस्टाउँछ। माटोबाटै उत्पन्न धानको भात र पानी खाएर मानिस बाँच्छ। त्यो भात र पानी दिसा, पिसाब र पसिनामा परिणत हुन्छ।
दिसा, पिसाब र पसिना मलमा परिणत हुन्छ। यी तत्त्व हाम्रो सेफ्टी ट्यांक वा ढलबाट खोलानाला हुँदै समुद्रतिर पठाउनुको सट्टा तिनीहरूलाई माटैमा मिलाइदिन सके प्राणीजगत्को अस्तित्वको आयुलाई केही लम्ब्याउन सकिन्छ।
डुबेर मर्नेछन् मानिस
मान्छेले प्रयोग गर्ने गरेको खानेकुरा, लगाउने लुगा, घर, चलाउने सामग्री आदि नै ती तत्त्व हुन्।
तिनीहरू प्राय: वनस्पतिको रूप बदलिएर बनेका अर्का तत्त्वहरू हुन्। धातुको रूप बदलिएर बनेका हुन्छन्, मानिसले प्रयोग गर्ने कतिपय सामग्री।
चाहे त्यो वनस्पति होस् वा धातु, ती सबै माटोबाट आएका हुन्।
मानिसको अज्ञानता, लोभ र भयका कारण मानिसले भोगचलन गर्दै आएको सामग्री अर्थात् रूपान्तरित तत्त्व विभिन्न तरिकाले माटैमा फर्काउनुपर्नेमा माटोमा नफर्काई खोला, खोल्सा, नदीमा फ्याँक्ने गरिएको छ।
गाउँघरमा खाएर पिएर निस्केको दिसापिसाब खोलाखोल्सामा बगिरहेको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा फोहर तत्त्व ढलमार्फत बागमतीमा फालिन्छ। दिसापिसाबमात्रै होइन; लुगाफाटा, प्लास्टिक, कागज अर्थात् खेर जाने सबै सामग्री खोलानाला, नदी हुँदै समुद्रमा पुग्छन्।
नेपाल सरकारले खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम त ल्याएकै हो।
सहरमा शौचालयमा दिसापिसाब गर्ने गरिएकै हो। तर ती सबै दिसापिसाब वा नुहाउँदा र लुगा धुँदा निस्कने पानी त माटोमा मिल्नुपर्नेमा त्यसो त हुन सकेन।
जहाँ त्यसको आवश्यकता छैन, त्यो त समुद्रमा पो मिसिने भयो त !
यदि यी रूपान्तरित तत्त्वहरू माटोमै रहने थिए भने चक्र मिल्ने थियो, तर ती सामग्री त समुद्रमा पुगिरहेका छन्। यस्तो चलन नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर छ।
काठमाडौंको मात्रै कुरा गरौं न ! यहाँ ५० लाख मानिस बस्छन्। तिनीहरूले दिनमा ६० लाख लिटर पिसाब फेर्छन्, १२ लाख किलो जति दिसा गर्छन्।
६० लाख लिटरजति नै लुगा धोएको र नुहाएको पसिना पानी पनि निस्कन्छ। त्यो कहाँ पुग्छ, त्यो त नदीनालामार्फत सीधै समुद्रमा पुग्ने हो।
नेपालको एउटा ठाउँको कुरा गर्दा त यस्तो अवस्था छ भने संसारभरका मानिसका दिसा, पिसाब र पसिना पानी पुग्ने ठाउँ त समुद्र नै हो। समुद्रमा यति धेरै मात्रामा ठोस र तरल वस्तु पुगेपछि त्यहाँको सन्तुलन बिग्रिँदैछ। त्यहाँका कतिपय प्राणी लोप भएर गइरहेका छन्।
भौतिक वस्तु समुद्रमा पुगेपछि त्यो त्यहीँ जम्न थाल्छ। यसरी भौतिक वस्तु समुद्रमा जम्दै गएपछि समुद्रको सतह माथि उठ्दै आउने नै भयो। हरेक सय वर्षमा समुद्र एक मिटर माथि उठ्दै आएको अनुमान गरिएको छ।
यही अनुपातमा समुद्रको सतह माथि उठ्दै जाने हो भने एक हजार वर्षमा १० मिटर समुद्र सतह माथि उठ्छ। त्यस अवस्थामा कति डुबान होला, अनुमान गरौं त ! त्यस बेला कति मानिस विस्थापित हुन्छन्।
के जमिनमा बस्ने मानिस, अन्य प्राणीजगत् र बिरुवाका लागि ठाउँ होला? यस्तो असन्तुलनले समुद्रमा रहने प्राणी बाँच्लान्? समुद्रमा आधारित खानेकुरा बाँकी रहला?
डढेर मर्नेछन् मानिस
अहिलेको युग हो, प्रविधिको। प्रविधि चलाउन इन्धन/ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। यसका लागि कोइला, डिजेल, पेट्रोल र दाउरा बाल्ने गरिएको छ।
यसरी ऊर्जाका लागि इन्धन बाल्दा र अर्कातिर एअर कन्डिसन चलाउँदा त्यसबाट निस्कने रसायन क्लोरोफ्लोरो कार्बनले पनि अर्को समस्या ल्याइरहेकै छ।
पहिले महाप्रलय हुँदा बिरुवा जमिनमुनि गएर रूपान्तरित हुँदा त्यो ठोसमा कोइला र तरलमा डिजेल पेट्रोल भयो।
यस्तै ग्याँस पनि बन्यो। त्यो इन्धनलाई मानिसले आफ्नो बुद्धिले जमिनमा निकालेर प्रयोग गर्न सिके।
आज एक वर्षमा नौ अर्ब किलो कोइला बालिन्छ। वैज्ञानिक नियमअनुसार एक किलो इन्धन बाल्दा २० किलो कार्बनडाइअक्साइड निस्कन्छ।
अब भन्नोस्, नौ अर्ब किलो कोइला बाल्दा कति किलो कार्बनडाइअक्साइड निस्केला? अर्कातिर कोइला निकाल्दा पृथ्वीमा त खाल्डो पर्दै जान्छ।
नौ अर्ब किलो कोइला निकाल्दा त नेपालजत्रो खाल्डो खनिन्छ भने एक हजार वर्षमा कत्रो खाल्डो पर्ला?
समुद्र उचालिँदै जाँदा समुद्रको पानी त्यो खाल्डोमा पनि पर्दै जान्छ। यसमा डिजेल र पेट्रोलले सिर्जना गर्ने कार्बन डाइअक्साइडको कुरा छोडौं।
यो संसारमा कैयौं जनावर र पन्छीहरू छन्। तिनीहरूको मलमूत्रमाथि घामको प्रकाश पर्दा त्यो वाफका रूपमा मिथेन ग्याँस बनेर आकाशमा फैलन्छ।
किनकि पशुपन्छीको मलमूत्र व्यवस्थित नहुँदा त्यो वाफका रूपमा आकाशमा फैलिरहेको छ।
यसले पनि पृथ्वीलाई तताइरहेको छ। हाम्रो गाउँघरमा रहने अव्यवस्थित रछ्यान मिथेन ग्याँसको स्रोत हुन पुगेको छ।
हामीले माटोबाट उत्पादन हुने खानेकुरा खाएर उत्पन्न भएको अर्को तत्त्व माटोमै नमिलाइदिँदा माटो रूखो हुन थाल्यो।
बिरुवा सप्रन छाडे। मल र जल नपाउँदा बिरुवा जिम्लन लागे। यस्तो अवस्थामा उत्पादन त घट्ने नै भयो। खान नपुग्ने अवस्था आइपर्‍यो। त्यसपछि उत्पादन बढाउनुपर्ने भयो।
वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए- नाइट्रोजन, पोटास र फस्फोरसजस्ता तत्त्वको अभावमा उत्पादन घटेको। धेरै र सजिलोसँग हावाबाट नाइट्रोजन प्राप्त हुने पत्ता लाग्यो, अनि खानीबाट फस्फोरस र पोटास।
तर विडम्बना के भयो भने हावाबाट नाइट्रोजन र खानीबाट पोटास र फस्फोरसलाई ठोस मलमा परिणत गर्न त इन्धन नै बाल्नुपर्ने भयो।
संसारमा हरेक वर्ष चार अर्ब टन उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुन्छ।
कृषि वैज्ञानिक मदन राई आफ्‍नै दिसापिसाबबाट बनेको जैविक मल देखाउँदै। तस्बिर: अन्‍नपूर्ण
त्यसका लागि ३० करोड टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न पर्छ। यसका लागि ३० करोड टन नै कोइला बाल्नुपर्ने हुन्छ।
३० करोड टन कोइला बाल्दा ६ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन हुन्छ र त्यसले आकाश ढाक्छ।
पञ्‍चत्‍व रुपान्तरण हुने चक्र खल्बलिइएपछि कसरी प्राणीजगत यो संसारमा टिकिरहन सक्छ? यसरी चक्र खल्बलिइरहेको अवसथा देख्दा र वैज्ञानिकहरुले प्रमाणित गरिरहेको तथ्‍य देख्दा लाग्छ, भविष्‍यमा मानिसलगायत प्राणीजगत् डुबेर, डढेर र सुकेर मर्नेछन्।
फेरि नाइट्रोजनयुक्त मल असन्तुलित तरिकाले प्रयोग गर्दा त्यसबाट फेरि मिथेन, नाइट्रोस अक्साइड, आइट्राइट गरी तीन ग्याँस आकाशतिर फैलन्छ। यी ग्याँसले कार्बनडाइअक्साइडभन्दा सैयौं गुणा बढी आकाशलाई तातो बनाउँछ।
वैज्ञानिकहरूले हरेक सय वर्षमा पृथ्वीमा दुई सेल्सियसको दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको पत्ता लगाइसकेका छन्।
यही अनुपातमा तापक्रम वृद्धि हुने हो भने हरेक हजार वर्षमा त २० डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्छ।
त्यति तापक्रम बढेपछि यो संसारमा प्राणीजगत् र वनस्पति डढेर खरानी हुँदैन त?
सुकेर मर्नेछन् मानिस
तापक्रम वृद्धि हुँदा पानीको चक्रीय प्रणाली नै तोडिन्छ। पृथ्वी तातिँदै जाँदा पानी पर्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ।
पानी पर्नका लागि शून्य डिग्री चाहिन्छ।
अहिलेको तापक्रम वृद्धि हुने क्रम यही रूपले जारी रहने हो भने संसारमा बरफ नै हुँदैन।
अबको एक हजार वर्षमा त पृथ्वीमा तातो र सुक्खा वाफमात्रै हुन्छ। तातो र सुक्खा हावाबाट वर्षा हुँदैन।
यस्तै ताजा पानीको स्रोत भनेको हिउँ हो। हेर्नुस् त हाम्रा हिमाल, कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेका छन्।
पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ। भविष्यमा समुद्रले पृथ्वीलाई ढाक्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी पनि खान अयोग्य हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा मानिस सुकेर मर्दैनन् त?
मानिसलाई बाँच्न हावा चाहिन्छ। श्वासप्रश्वासका लागि बढीमा चार सय पीपीएम कार्बनडाइअक्साइड हुन्छ।
ताजा हावामा दुई सय ५० देखि तीन सय पीपीएमसम्म कार्बनडाइअक्साइड हुन्छ।
वायु प्रदूषणको यही अनुपात कायम रहने हो भने मानिस निस्सासिएर पनि मर्छन्।
सामान्य रूपमा हामीले प्राणीजगत्को अस्तित्वको आयुलाई लम्ब्याउन सक्छौं। हामीले खाएर पिएर निस्केको दिसा, पिसाब र पसिना बिरुवामार्फत बाटोबाट प्राप्त गरेको तत्त्व हो।
ती तत्त्वलाई माटोमा फर्काउन सक्नुपर्छ। हामीले र पशुपन्छीले खानेपिउने कुरामा केही भिन्नता छैन, जस्तो हामी छानेर खान्छौं।
हामी धानको चामल खान्छौं, पशुले पराल र भुस खान्छ।
हामी काउलीको फूल खान्छौं, पशुपन्छीले पात र डाँठ खान्छ।
पानीको हकमा हामी मूलको पानी, तातोपानी, फिल्टर र बोतलको पानी पिउँछौं, पशुपन्छीले जस्तो पानी भेट्छ त्यही खान्छ।
खाएको र पिएको खाना र पानी ठोस र तरल रूपमा शरीरबाहिर निस्कन्छ।
हामीले जुन कुरा ठोस रूपमा निकाल्छौं त्यो दिसा हो, पशुपन्छीले निकालेको गोबर, सुली र बड्कौला हो।
हामीले निकालेको यही तत्त्वलाई माटोमा मिलाए त्यो समुद्रमा जानबाट रोकिन्छ र समुद्रको सतहको उचाइ पनि बढ्ने अनुपात कम हुन्छ।
यस्तै ती तत्त्व बिरुवाले खान्छ, बिरुवा हुर्कन्छ र त्यसले हामीलाई अक्सिजन दिन्छ, कार्बनडाइअक्साइड आफूले लिन्छ।
यसो भयो भने कार्बनडाइअक्साइड आकाशमा फैलने अनुपात पनि कम हुन्छ।
बिरुवामार्फत माटोबाट प्राप्त भएको तत्त्व हामीले खाएर हाम्रो शरीरबाट निस्केको रूपान्तरित तत्त्वले मल र जलको रूपमा माटोमै मिलाउँदा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नु पर्दैन।
यसले चक्रीय प्रणाली खल्बलिनुबाट जोगाउँछ। के हामी यति काम गर्न सक्दैनौं? यसो भयो भने मानिस डुब्न, डढ्न, सुक्न र निस्सासिनबाट जोगिँदैनन्?
हो, माथि मैले जे भने त्यो म गर्छु। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म बिहानै उठेर दुई गिलास पानी पिउँछु।
पानी पिएको १० मिनेटपछि दिसा गर्ने बानी छ मेरो। म दिसा कहाँ गर्छु थाहा छ तपाईंलाई? म त मेरो कार्यालयमा दिसा गर्छु। अचम्म नमान्नुहोस्, म यसै गर्छु।
म प्लास्टिकको बाल्टिनमा पोलिथिन ब्याग राखेर दिसा गर्छु।
अस्पतालमा बिरामीले प्रयोग गर्ने प्वाल भएको कुर्सी ल्याएको छु, त्यसमा बस्छु र बाल्टिनमा दिसा गर्छु।
अनि एउटा बोतल हुन्छ, त्यसमा पिसाब फेर्छु। टेलिभिजन हेर्दै आनन्दले दिसापिसाब गर्छु।
दिसा गरिसकेपछि त्यो नगनाओस् भनेर प्राय: खरानी, नभए काठको धूलो र त्यो पनि नभए मसिनो सुकेको एक टोकरी धूलो हाल्छु।
दिसा गरिसकेपछि मलद्वार र हात धुनका लागि पौने लिटर पानी बाटामा प्रयोग गर्छु।
साबुनले हात धुन्छु। यो पानी पनि हामी मलका रूपमा प्रयोग गर्छौं।
दिसा गरेको बाल्टिन भरिएपछि खाडलमा लगेर झारपात, गोबर, सुलीसँग मिसाएर सडाउँछौं।
त्यो सडेपछि मल हुन्छ। त्यो मल हिजो जुन रूपमा माटोबाट आएको छ, त्यहीँ मिलाइदिन्छौं।
त्यो मल बिरुवाले पाउँछ र बिरुवाले हामीलाई फल दिन्छ। त्यो फल खाएर हामी बाँच्छौं।
मेरो घर, कार्यालय तथा विद्यालयमा जम्मा भएको दिसा, पिसाब र पसिनापानीलाई हामी खेर जान दिन्नौं।
हाम्रोमा त शौचालय पनि कस्तो छ भने एकातिरबाट दिसा र अर्कोतिरबाट पिसाब जान्छ र त्यो हामी ड्रममा जम्मा गर्छौं।
अलगअलग ठाउँमा थुपार्छौं। पिसाब ड्रममा राखेको एक महिनामा कीटाणु मरिसक्छ र त्यो झोल मल बन्छ।
त्यसलाई हामी माटोमै मिसाउँछौं। दिसा पनि यसरी नै कुहाएर मल बनाउँछौं र माटोमै मिलाउँछौं।
जसरी ठोस मलले माटोलाई नरम बनाउनुका साथै अन्य तत्त्व दिन्छ, झोल मलले बिरुवालाई हलक्क बढ्न मद्दत गर्छ।
त्यसैले पिसाबबाट निस्केको झोल मललाई बिरुवाका लागि दूध भन्छु म त।
तपाईंले पनि यसो गरेर पृथ्वीलाई माया गर्ने हो भने प्राणीको अस्तित्वको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ।
यसो नगर्ने हो भने हामी यो संसारबाट लोप भएर जाने समय धेरै लामो छैन, होश गरौं।
(कृषि वैज्ञानिक राईसँग अन्नपूर्णकर्मी राजकुमार दिक्पालले गरेको कुराकानीमा आधारित)